ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြေညာချက်များယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေများနှင့်တာဝန်များနမူနာ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြေညာချက်များယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေများနှင့်တာဝန်များနမူနာ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 213 views
scripted ထုတ်ကုန်ကနေ chat သို့မဟုတ်ဆန်းစစ်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်မီဒီယာအကောင့်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မက်ဆေ့ခ်ျများအတွက်အဖြစ်, လေလှိုင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သံအပေါ်. ဧည့်သည်များတွေ့ဆုံနိုင်ပါစေ, အပိုင်းအသိအမှတ်ပြုရန်, သို့မဟုတ်ဘာသာရပ်သို့မဟုတ်ထိရောက်မှုအနုပညာရှင်ကြေညာ.
အားကစားပြင်ဆင်ပါနှင့်ထောက်ပံ့, ကြေညာချက်, သို့မဟုတ်ရာသီဥတုအကောင့်အသစ်များ၏, ဒါဟာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပွဲစဉ်အချိန်-slot နှစ်ခုဖော်ပြစေခြင်းငှါဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းများလာပြီနှင့် reworking.
channel များကိုတည်ထောင်ရန်, နှင့်ဖော်ထုတ်သို့မဟုတ် display တွေအနီး, မှတ်မိသို့မဟုတ်ဖတ်ပါစာသားများလျှောက်ထား, နှင့် / သို့မဟုတ် adlibs.
နည်းလမ်းပစ္စည်း Pick, အတူတူကုမ္ပဏီများနှင့်ကူမသောသူနှင့်အတူ, နည်းလမ်းအထူးအပါအဝင်ရှုထောင့်ပေါ်တွင်သင်၏အများပြည်သူထံမှ based, လူအစုအဝေးအကြိုက်, သို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများ.
သည်အခြားကိစ္စရပ်များနှင့်အတူဂီတအပေါ် Comment, such as for instance visitors or climate situations.
Mention section fails music choices, ကြော်ငြာ, or public-service info details, from hearing market and acknowledge needs.
Debate or mild sections demonstrates on matters for example recent affairs, အနုပညာလက်ရာများ, or schooling.
Active Listening-Offering whole attention to what other-people assert, built ခံရသည့်အချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီး, စံပြအဖြစ်မေးမြန်းမေးမြန်းချက်, အစားမမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာ mesmerizing ထက်.
Thinking that is critical-Employing reason and reasoning to spot flaws and the skills of alternative solutions, ပြဿနာများကောက်ချက်သို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
Tracking-Tracking/Discovering performance of other persons, သင်ကိုယ်တိုင်, or agencies to make advancements or consider corrective steps.
installation-Installing Device များ, စက်, ဝါယာကြိုး, ကျန်တာတွေကျေနပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
ခြေရာခံခြင်းသည်-လေ့လာခြင်းညွှန်းကိန်းစစ်ဆင်ရေး, နာရီမျက်နှာပြင်, or different symptoms to ensure there isamachine functioning appropriately.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းသုတေသန-ဖျော်ဖြေအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုများ, န်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးအရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါ.
analysis-ကိုစူးစမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏မျိုးလုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဘယ်အရာကိုများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်လမ်းတိုးတက်မှု, အခြေအနေများ, နှင့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ရလဒ်များလွှမ်းမိုးနိုင်သည်.
Supervision of Financial Resources-Determining how income will soon be spent to get the job performed, နှင့်စာရင်းကိုင်သည်ဤအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်..
Administration of Substance Resources-Observing and acquiring for the correct use of products, သာယာအဆင်ပြေမှုများ, and devices hadaneed to do certain work.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-directing ရှေးရှေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုသူတို့အနေဖြင့်, လေးလည်း, နှင့်လုပ်ဆောင်လှုံ့ဆော်, task ကိုများအတွက်အထိရောက်ဆုံးလူတွေကိုဖော်ထုတ်.
ဇွဲ – 93.81%
စီမံကိန်း – 94.62%
ခေါင်းဆောင်မှု – 90.17%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 92.73%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – 93.18%
ယဉ်ကျေးမှု Direction အဖွဲ့ – 92.67%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 94.34%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 93.48%
ပါဝင် – 96.30%
အနက်ပေါ်အာရုံစူးစိုက် – 92.66%
ကျင့်ဝတ် – 94.67%
လွတ်လပ်ရေး – 94.80%
တီထွင်ဖန်တီးမှု – 91.86%
analytical အတွေးအခေါ် – 87.37%